ဝှိုက်ကဒ်မဲ၊ ဝှိုက်ကဒ်ဖြူ၊ ကုိုးကန့် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ပုဂံခေတ်မှာရှိသော မွတ်စလင်မ်များ
ပိုငွေကို လုပ်ငန်းလုပ်ချင်တဲ့ မုစ်လင်မ်တွေကို အတိုးမဲ့ချေးဗျာ။ ကာလတစ်ခုအတွင်း အရစ်ကျ ပြန်ဆပ်ခိုင်း »
ဝှိုက်ကဒ်မဲ၊ ဝှိုက်ကဒ်ဖြူ၊ ကုိုးကန့်
လူတွေ သိထားတာက ဝှိုက်ကဒ်တစ်မျိုးတည်းဖြစ်တယ်။ အမှန်က ဝှိုက်ကဒ်မဲနဲ့ ဝှိုက်ကဒ်ဖြူ နှစ်မျိုးဖြစ်နေပြီ။
ဝှိုက်ကဒ်မဲဆုိုတာ ရခုိုင်ပြည်နယ်က မွတ်စလင်တွေဆီက ဥပဒေနဲ့အညီ ထုတ်ပေးထားတဲ့ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကဒ်တွေကုို ဥပဒေမဲ့ အနုိုင်ကျင့် သိမ်းယူပြီး အစားထုိုး ထုတ်ပေးထားတဲ့ ယာယီသက်သေခံလက်မှတ်ကုို ဆုိုတယ်။ ယာယီဆိုပြီး နှစ်(၂၀)ကျော်ကြာသည်အထိ မလဲပေးဘဲ ရခုိုင်ပြည်နယ်မှာ ပြသနာတွေနဲ့ အစဉ်ရှုပ်ထွေးနေအောင် တမင်ညစ်ပတ်ထားတာလည်း ဖြစ်တယ်။ (မြန်မာပြည်အနှံ့က တုိုင်းရင်းသားတွေကုို ထုတ်ပေးထားတဲ့ ဝှိုက်ကဒ်ကို ဒီနေရမှာ မဆွေးနွေးပါ။)
ဝှိုက်ကဒ်ဖြူဆိုတာ ပြည်ဖျက်မဲ့အစုိုးရက မတော်လောဘနဲ့ အမြင်တို အသိခေါင်းပါးစွာ ဥပဒေကုို မထီမဲ့မြင်လုပ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံက တရုတ်တွေကို တာဝန်မဲ့ ဗရမ်းဗတာ ထုတ်ပေးထားတဲ့ ဝှိုက်ကဒ်ဖြစ်တယ်။ ယွမ်ငါးထောင်ပေးသူတုိုင်းကုို ဗဟုိုအစုိုးရက စီမံချက်ချပြီး အလွယ်တကူ ထုတ်ပေးထားခဲ့တာပါ။
ဝှိုက်ကဒ်မဲ(သာမန်ဝှိုက်ကဒ်) ပေးခြင်းခံထားရသူ၊ လုယက်၊ အကြမ်းဖက်၊ သတ်ဖြတ် မောင်းထုတ်ခံ ရခုိုင်ပြည်နယ်က မွတ်စလင်တွေဟာ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရနဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေ၊ ရခိုင်သံဃာတွေရဲ့ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ခရီးသွားလာခွင့်တွေ စနစ်တကျ ဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ ထားမှုကြောင့် ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ (၂)နှစ်ကျော်ကြာ ယနေ့တိုင် ဆင်းရဲ ငတ်ပြတ် ချိ့တဲ့ သိမ်ငယ်စွာ နေထိုင်ကြရဆဲဖြစ်တယ်။
ယွမ်ငါးထောင်ပေးလိုက်တာနဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ ချက်ချင်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာ၊ အခြေစိုက် အိုးအိမ်ဝယ်ယူ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေ အခုိုင်အမာလုပ်နေကြတဲ့ ဝှိုက်ကဒ်ဖြူကုိုင်တွေကတော့ တရုတ်နိုင်ငံမှာမွေး၊ တရုတ်စကားပြော၊ ခိုးဝင်တရုတ်တွေဖြစ်တယ်။
ဝှိုက်ကဒ်မဲပေးထားခံရသူ ရခုိုင်ပြည်နယ် မွတ်စလင်တွေဟာ ဒီနိုင်ငံကလွဲရင် အခြားသွားစရာ၊ နေစရာမရှိတဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ မွေး၊ ဒီနိုင်ငံမှာ သေကြရမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ ဒီနိုင်ငံကသာ ကုိုယ့်မြေ၊ ကုိုယ့်ရေဖြစ်လုို့ ဒီနုိုင်ငံအတွက် အသက်ပေးကြမဲ့သူတွေလည်း ဖြစ်တယ်။
ဝှိုက်ကဒ်ဖြူတွေက လာကတည်းက သာလုို့ လာကြသူတွေဖြစ်တယ်။ အကျိုးရှိသလောက် နေကြမယ်။ ဒီနုိုင်ငံက တောကုန်ကုန်၊ တောင်ပြောင်ပြောင် ရသလောက် အမြတ်ထုတ်မယ်။ မသာတဲ့ မမြတ်တဲ့တစ်နေ့ တရုတ်ပြည်ပြန်မယ်။ ဒီနိုင်ငံနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ စစ်ဖြစ်ခဲ့ရင် သူတို့အမိနိုင်ငံ တရုတ်ဘက်ကနေုပြီး မြန်မာနိုင်ငံကိုတောင် ပြန်တိုက်ကြမည့်သူများ ဖြစ်တယ်။
ဝှိုက်ကဒ်မဲတွေက ရခိုင်ပြည်မှာ ပိတ်လှောင်ခံထားရတယ်။ နိုင်ငံသားကဒ် စိစစ်ထုတ်ပေးပြီးသူတွေ အနည်းအကျဉ်းတောင် ဆက်လက်အပိတ်လှောင် ခံနေရဆဲဖြစ်တယ်။ (ဒီလူတွေ အစိစစ် မခံကြဘူးဆိုပြီး ငတုံးတွေက အပြစ်ဆိုကြသေးတယ်။ စိစစ်ခံပြီး နိုင်ငံသားကဒ် အသစ်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ နိုင်ငံသားတောင် အပြင်ထွက်ခွင့် မပေးဘဲထားတော့ ဟိုက သူတို့လို ငတုံးတွေ၊ ငရူးတွေမှ မဟုတ်တာ။ စိစစ်ပြီးလို့ ဘင်္ဂါလီအဖြစ်ခံပြီးရင်လဲ၊ ဆက်လှောင်ထားမှာကို ဘယ်သောက်ရူးက လာပြီး စိစစ်ခံမှာလဲ။)
ဝှိုက်ကဒ်ဖြူ ကိုင် တရုတ်တွေက မကွေးတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်အနှံ့ တစ်နုိုင်ငံလုံးကုို တံခါးမရှိ၊ ဓါးမရှိ ငွေခင်း သွားလာ၊ အခြေစိုက်ပြီး စီးပွါးရေးလုပ်နေကြတယ်။ မြန်မာ့စီးပွါးရေး သော့ချက်တွေ၊ အိမ် ခြံ မြေဈေးကွက်တွေကို လှုပ်ခတ် ချုပ်ကိုင် အမြတ်ထုတ်နေကြတယ်။ ဆင်းရဲသား တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ ဝမ်းစာ ထုတ်ကုန် ကောက်ပဲသီးနှံတွေကုိုလည်း သူတုို့ကြုိုက်သလုို ဈေးကစား ဂုတ်သွေးစုပ်နေကြတယ်။
ရခုိုင်ပြည်နယ်မှာ ဝှိုက်ကဒ်မဲသမား ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိသလဲ။ ကိုးသောင်း ခြောက်ထောင်ကျော်ဘဲ ရှိပါတယ်။
ဝှိုက်ကဒ်မဲတွေရဲ့ ဘိုးစဉ် ဘောင်ဆက် မွေးသေစာရင်းအတိအကျ လဝကရုံးမှာ ရှိတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဘယ်သူတစ်ယောက်မှ လဝကမသိဘဲ ခိုးဝင်လို့မရဘူးလို့ ဦးခင်ရီကြွားခဲ့တာကို မှတ်မိကြလား။ လူမပြောနဲ့ နွားမွေးရင်တောင် နစကမှာ စာရင်းအတိအကျ ရှိပါတယ်။ နှစ်တိုင်း အနည်းဆုံးတစ်ခါ၊ နှစ်ခါ အိမ်ထောင်စုစာရင်း ပြန်စစ်ထားတာ နှစ်(၂၀)ကျော်ပါပြီ။
မနေ့က ခိုးဝင် ဒီနေ့ ဝှိုက်ကဒ်ဖြူကိုင် တရုတ်ဘယ်လောက် ရှိနေပြီ ထင်သလဲ။ မန္တလေးတိုင်း တစ်ခုတည်း တစ်သိန်းကျော်တယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ အသိအမှတ်ပြု ဝှိုက်ကဒ်ဖြူကိုင် ခုိုးဝင်တရုတ် ခြောက်သိန်း ရှစ်သောင်းကျော်နေပါပြီ။
ဝှိုက်ကဒ်ဖြူနဲ့ ကိုးကန့် ဘယ်လိုဆက်စပ်နေသလဲဆိုတာ ဆက်ဆွေးနွေးပါမယ်။
အမှန်မတော့ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက် အာဏာနဲ့ စည်းစိမ်အတွက် ဘိန်းသမားနဲ့ပေါင်း ကိုယ်ကျိုးရှာနေခဲ့လို့ တိုင်းပြည်လုံခြုံရေးနဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကုို အခုလို ထိခိုက်ရတာဖြစ်တယ်။ (မူးယစ်ဂိုဏ်းတွေမှာ ဆိုရိုးရှိတယ်။ သွား မပတ်သက်နဲ့။ ပတ်သက်ပြီးရင် ပြန်ထွက်လို့ မရဘူး။ ထွက်ရင် အသေထွက်ဘဲရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။)
ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ကြေညာချက်အရ ဝှိုက်ကဒ်တွေ တရားမဝင်တော့ရင် ယွမ်ငါးထောင်ပေး ဝှိုက်ကဒ်ဖြူကိုင်ထားတဲ့ မြန်မာတစ်ပြည်လုံးမှာ သန်းထောင်ပေါင်းများစွာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေ ကြိုးကိုင်ချယ်လှယ်နေသူ တရုတ်တွေရဲ့ အကျိုးစီးပွါးတွေကို အကြီးအကျယ် ထိခုိုက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၉ ခု သြဂုတ်လမှာ ဖုန်ကြားရှင်ကုို မောင်းထုတ်ပြီး တရုတ်ပုိုင် ဘဏ်တွေ၊ စီးပွါးရေးတွေကုို မြန်မာအစိုးရ ဗုိုလ်ချုပ်တွေ အချောင်သိမ်းယူခဲ့တဲ့ အဖြစ်မျိုးကုို ဝှိုက်ကဒ်ဖြူကုိုင် တရုတ်တွေ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ထပ်အဖြစ်မခံကြတော့ပါဘူး။
ဝှိုက်ကဒ်ဖြူရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ထွက်ပေါက်က ကိုးကန့်ဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် ဖုန်ကြားရှင်ကုို ကိုးကန့်မှာ ပြန်လည်အခြေစုိုက် အသက်သွင်းရေးက ဝှိုက်ကဒ်ဖြူကုိုင် တရုတ်နုိုင်ငံသားတွေအတွက် သေရေး ရှင်ရေးဖြစ်လာတယ်။
ဖုန်ကြားရှင် အာဏာရမှ ဝှိုက်ကဒ်ဖြူတွေအားလုံး ပန်းရောင်ကဒ်ကုိုင် ကုိုးကန့်တုိုင်းရင်းသား စစ်စစ်ကြီးတွေ ဖြစ်ရမှာကုိုး။
လွှတ်တော်လည်း တက်နုိုင်မယ်။ ဝန်ကြီးလည်း ဖြစ်နုိုင်တယ်။ သမ္မတတောင် ဖြစ်နုိုင်ပါသေးတယ်။
တရုတ်ပြည်သူ့ မြန်မာသမ္မတ နုိုင်ငံတော်ကြီး ပေါ့ဗျာ။
အရုိုးနဲ့ စည်းရုိုးထုိုးမဲ့ မျိုးချစ်တွေကလည်း ကြောက်ဖျားဖျား၊ ခြေအေးဝမ်းယောင်၊ အသံဝင်၊ နှာစေးကုန်ကြပြီ။
ကုိုယ်ဖော်တဲ့ဆေး ကုိုယ်စားကြပေတော့ စစ်ဗုိုလ်ချုပ်ကြီးများတုို့ရေ။
This entry was posted on February 17, 2015 at 5:42 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.